ny filoham-pirenena omaly alakamisy 26 desambra 2019 tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra. Voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara no nibatan’ny ekipam-pirenena vehivavy io amboara io. Niarahaba manokana ireto mpilalao baolina kitra ireto ny tenany nitondra avo ny voninahi-pirenena. Noho izany dia nanolotra ho azy ireo « prime » mitentina 1 tapitrisa ariary tsirairay avy miaraka amin'ireo mpikarakara ara-teknika ny filoham-pirenena. Nitondra ny teny fisaorana amin’ny anaran’ny federasiona sy ny ekipa iray manontolo ny filohan’ny FMF Raoul Arizaka Rabekoto izay nankasitraka manokana ny filoha Andry Rajoelina amin’ny fanohanany ny taranja baolina kitra Malagasy sy ny fanatanjahantena amin’ny ankapobeny.